कोरोनाले जुराएको अवसर ! बाँझो जमीन देखिनै छाड्यो
मुग्लानी खबर संवाददाता लमही, १६ असार
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमीन आजभोलि हरियाली देखिन थालेको छ । धेरै वर्षदेखि खेती नगरेर बाँझो रहँदै आएका खेतबारीमा किसानले यस वर्ष समयमै खेती शुरु गरेका छन् ।
विदेशबाट फर्केकाहरु मात्र हैन, जिल्ला बाहिरबाट आएकाहरुले पनि खेती गरेका छन् । जिल्लामा धान मात्रै हैन, करेसाबारीको उत्पादनसमेत बढेको अनुमान गरिएको छ । वर्षे तरकारीका बीउ पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै बिक्री भएको कृषि प्राविधिक माधव केसीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘धान, तरकारीसँगै अन्य कृषि उत्पादन पनि बढ्ने देखिन्छ, घरको छेउछाउको बाँझो जमीनमा पनि खेती भएको छ’’, केसीले भन्नुभयो । भारतबाट फर्किनुभएका केशव वलीले भारतमा आफ्नो रोजगारी गुमेकाले गाउँमै खेत भाडामा लिएर धान रोप्न थालेको बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १६, २०७७, ०८:२१:००
पाँच उत्कृष्ट कृषकलाई नगदसहित पुरस्कृत
छुपुमा छुपु हिलोमा धान रोपेर कहिले सकिएला ?
सब डिभिजन वन कार्यलय बिजौरीद्वारा आपका वृक्ष बितरण